खासमा तपाईं–हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा तिर्नुपर्ने भाडादर कति हो ? भन्ने थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक वि.सं. २०७२ माघ २४ गते तोकेको भाडादर भनेको प्रति ४ किलोमिटरसम्म १३ रुपैया“ हो । हुन त यो भाडादर कायम भएको ३ वर्ष पूरा भएर ४ वर्ष लागेको छ । त्यो बेला नेपालमा १ लिटर डिजेलको भाउ ७५ रुपैयाँ थियो ।
तर, तपाईं–हामीले सार्वजनिक यातायात चढ्दैपिच्छे अर्थात् पटकैपिच्छे १५ रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको सत्य हो । त्यसमा पनि हालसम्म धेरै यात्रुले त सार्वजनिक यातायात चढेबापतको न्यूनतम भाडादर १३ रुपैयाँ हो भन्ने नै बिर्सिसके होलान् ! आजकाल सार्वजनिक यातायातमा प्रायः पूर्ण चालक गाडी मालिक अर्थात् साहू हुन्छ भने सहचालिका महिला हुन्छिन् । र, ती सहचालिका पनि साहूनी नै हुन्छिन् । कुनै पनि यात्रुले फिर्ता पाउनुपर्ने २ रुपैयाँ फिर्ता पाउनका लागि जोर–जबरजस्ती गर्दैनन् । केही गरी कुनै यात्रुले जसरी पनि आफुले पाउनुपर्ने २ रुपैयाँ फिर्ता चाहिन्छ भनी सहचालकसँग जोड जबर–जस्ती गरेमा ‘कस्तो मक्खिचुस रै’छ ! जाबो २ रुपैयाँ पनि नछाड्ने !’ भन्दै अनि आपूm भलाद्मी भइटोपल्दै ‘ए... दाइ, ए... दिदी छाड्दिनोस्, जाबो २ रुपैयाँका लागि के किचकिच गर्नुहुन्छ ?’ भनी आपूmजस्तै ठगिँदै गरेको यात्रुलाई उल्टै आफुले समेत फिर्ता पाउनुपर्ने पैसा नमाग्न आग्रह गर्छौं ।
यसरी हरेक पटक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रुले २ रुपैयाँ त हो नि ! भनी २ रुपैयाँ त्यसै छाडिदिँदा सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले हरेक दिनमा कति कमाउँछन् ? भन्नेबारेमा भने तपाईं–हामी यात्रुमध्ये धेरै कमले मात्रै थाहा पाएका छौं । त्यसैले मैले गत ७ चैत, २०७४ मा क्लिकमान्डु अनलाइनमा पढेर थाहा पाएको कुरो मजस्तै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले थाहा पाउनुहोस् भनी यहाँ केही तथ्य पेस गरेको छु । एउटा उदाहरण हेरौं । रत्नपार्कदेखि लगनखेलको दूरी कति किलोमिटर हो ? किनभने अधिकांश बस, मिनिबस, माइक्रो, टेम्पोहरूले एकतर्फी भाडा १९-२० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । त्यस्तै अधिकांश अन्य रुटमा पनि सार्वजनिक यातायातले यसरी नै बढी भाडा असुल्ने गरेका छन् । जे होस्, यसरी यात्रुबाट हरेका दिन यसरी तोकिएको भन्दा बढी भाडा उठाउने सार्वजनिक यातायातले दैनिक कति रकम उठाउँदा रहेछन् ? त्यसबारेमा तल उल्लेख गरिनेछ ।
७ चैत, २०७४ मा क्लिकमान्डु अनलाइनमा उल्लेख भएअनुसार त्यो बेला कठमाडौ उपत्यकामा मात्रै ८९ हजार ५ सयवटा विभिन्न यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायाता चल्थे । निश्चय नै हाल सो संख्यामा भारी वृद्घि भएको छ । त्यसरी काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने ८९ हजार ५ सयवटा विभिन्न यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायाताले दिनमा एकपटकमा २२ लाख ३७ हजार ५ सय यात्रु बोक्छन् । यसरी हेर्दा एक दिनमा तीन पटकमात्रै ओहोरदोहोर गर्दा पनि ६७ लाख १२ हजार ५ सय यात्रु बोक्छन्, सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले । १ करोड ३४ लाख २५ हजारभन्दा बढी सरकारले तोकिदिएको भन्दा बढी भाडा उठ्ने गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये २० प्रतिशत विद्यार्थी चढ्छन् भनेर मान्ने हो भने पनि सार्वजनिक यातायात धनीहरूले दैनिक १ करोडभन्दा बढी नै यात्रुबाट बिनसित्तिमा कमाउने गरेको देखिन्छ ।
यसरी सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले यात्रुबाट अवैध ढंगले दैनिक करोडौं कमाइ गरिरहेको थाहा पाउने महानुभावहरूमध्ये कसै न कसैले यसबारेमा अवश्य नै आवाज उठाउनुहोला भन्ने आशा आशा गरेको छु ।
चीनलाई बजार विविधीकरण गर्ने अवसर
बजेटले चियाउन नसकेको त्यो पाटो
सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण किन ?